आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १८ गते। आइतबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 Last updated Nov 3, 2018
इश्वी सन् २०१८ नोभेम्बर ४ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– द्वादशी, २४:५४ बजेउप्रान्त त्रयोदशी। नक्षत्र– उत्तरफाल्गुनी, २२:०२ बजेउप्रान्त हस्त। योग– वैधृति, २५:५९ बजेउप्रान्त विष्कम्भ। करण– कौलव, १३:४९ बजेदेखि तैतिल, २४:५४ बजेउप्रान्त गर। आनन्दादिमा मित्र योग। चन्द्रराशि– कन्या। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:१७ बजे, सूर्यास्त– १७:१६ बजे र दिनमान २७ घडी २७ पला। वैष्णवहरूको रमा एकादशी व्रत। सर्वार्थसिद्धि योग (अहोरात्र)। गोवत्स द्वादशी। त्रिपुष्कर योग २२:०२ बजे समाप्ति।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। व्यक्तिगत मामिलाको समाधान गर्न आफ्नो दृष्टिकोणमा उदार हुनुहोस्, तर आफुलाई प्रेम र हेरचाह गर्नेहरूलाई चोट नलाग्ने गिर बोल्नुहोस्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
पत्नीले तपाईंलाई खुशी बनाउन सक्छिन। विभिन्न स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियको काखमा सान्त्वना पाउनुहुनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। पारिवारिक द्वन्द्वले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा असर पार्न सक्छ।
आफुलाई एउटा सीमाबाट पर नपार्नुहोस् र उचित आराम लिनु पर्ने याद राख्नुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंले परिवारमा शान्तिनिर्माताको जस्तै काम गर्नुहुनेछ। समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्न सबैको समस्या सुन्नुहोस्। आज अचानक रोमान्टिक कुराहरू निस्कने सम्भावना छ। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। यो विवाहको उज्यालो पक्ष अनुभव गर्ने दिन हो।
तपाईंको रोग दुखको कारण हुन सक्छ। तपाईंले परिवारमा आनन्द बहाल गर्नको लागि सकेसम्म छिट्टै यसलाई हटाउनु आवश्यक छ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् – र आज आवश्यक वस्तुहरू मात्र किन्नुहोस्। तपाईंको साथीहरूसँग राम्ररी समय कट्नेछ तर सवारी चलाउँदा धेरै होशियार हुनुहोस्। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। आफ्नो ठूलो भरोसाको फाइदा लिएर बाहिर जानुहोस् र केही नयाँ सम्पर्क र मित्र बनाउनुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो जोडीको कठिन र साहसी पक्षको अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ जसले गर्दा तपाईंले असहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। प्रेम महसुस गर्ने र आफ्नो प्रियसँग बाँट्ने भावना हो। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। बिरामी भएको आफ्नो आफन्त हेर्न जानुहोस्। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। नयाँ विचारहरूलाई जाँच्ने सही समय। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। तपाईंले भिन्नै प्रकारको रोमान्स अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंको आज आफ्नो जोडीसँग राम्रो कुराकानी हुनेछ, र एक-अक्काको लागि कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने महसुस हुनेछ।
तपाईंको सकारात्मक दृष्टिकोणले तपाईंका वरिपरिका मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्नेछ। तपाईं आफ्नो दिनको लागि बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै खर्च गर्ने झुकावमा विचार गर्नुहोस्। अध्ययन नगरेर बाहिरी गतिविधिहरुमा भाग लिनाले आफ्ना आमाबाबुका क्रोधको सामना गर्नु पर्छ। क्यारियरको योजना बनाउनु खेल झैं महत्त्वपूर्ण छ। आमाबाबुलाई खुसी पार्न दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नु राम्रो हुन्छ। साँझको लागि विशेष केहि योजना बनाउनुहोस् र यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। आफ्नो प्रियको निष्ठामा शङ्का नगर्नुहोस्। आज तपाईंलाई धेरै रोचक निमन्त्रणाहरू आउनेछन् – साथै एउटा आश्चर्यजनक उपहार पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
निराशाको भावनालाई तपाईंमा प्रवेश गर्न नदिनुहोस्। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। व्यक्तिगत जीवनको साथै तपाईंले केही परोपकारी काममा आफूलाई संलग्न गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई व्यक्तिगत जीवनको लागत बिना नै मानसिक शान्ति दिन्छ। तपाईंले दुवैलाई बराबर ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो जीवनसाथीसँग बाहिर जाँदा राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको व्यञ्जनहरुको प्रलोभन् वा अंगालो जस्ता साना मागहरूको बेवास्ता गर्नुभयो भने उनी दुखी हुन सक्नु हुनेछ।
तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। “आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्।” तपाईंको आकर्षक प्रकृति र सुखद व्यक्तित्वले तपाईंलाई नयाँ मित्र बनाउन र सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्नुहोस्, यसले तपाईंको प्रेम सम्बन्धलाई खतरामा पार्न सक्छ । आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ – तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।